Madaxweyne Siilaanyo Oo Safar Kedis Ah Oo Aan Hore Loo Shaacin Ku Booqanaya Galbeedka Dalka | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa la filyaa inuu safar kedis ah oo aan hore loo shaacin ugu boqoolo gobolada galbeedka Somaliland. ma jiro war rasmi ah oo la xidhiidha safarka Madaxweynaha iyo ujeedadiisa, balse warar
shebekada wararka Araweelonews.com ka heshay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda oo ka gaabsaday in la xuso, ayaa sheegay in Madaxweyne Siilaanyo maalinta Sabtida ee beri safar jarmaado ah ugu baxayo dhinaca galbeedka Somaliland,.
Sidoo kale wararku ma sheegin ujeedada safarka Madaxweynaha iyo wuxuu la xidhiidho, balse waxay wararka la xidhiidha iyo xoggaha aanu ka helay safarkaaa sheegayaan inuu Madaxweyne Siilaanyo booqanayo magaalada Boorama, isagoo saacado kooban jooga doona, isla markaana kulamo la yeelanayo Odayaasha iyo masuuliyiinta gobolka Awdal, kuwaas oo aan la ogayn waxa uu kala hadli doono.
Socdaalkan ayaa noqonaya kii labaad labaad ee Madaxweyne Siilaanyo ku tago galbeedka Somaliland, balse booqashada xiligan oo kusoo beegantay, iyadoo ay jiraan cabshooyin iyo duruufo siyaasadeed oo ka aloosan dalka. sida muranka Ururadii ka hadhay tartanka qaarkood oo weli aan aqbalin natiijadaa iyo dhaqdhaaqyo madaxdhaqameedka Somaliland qaarkood looga gacan haadinayo dhinaca magaalada Muqdsiho oo shirka la doonayo in lagu ansixiyo dastuurka Soomaaliya ka socdo, kaas oo ay tageen shaqsiyaad kooban oo dhinaca Somaliland si qarsoodi ah uga baxay, balse aay xukuumadda Somaliland sheegtay inaan shirkaa waxba ka khusayn oo cidii tagtaa aanay metelin Somaliland loona aqoonsan doono inay denbi ka gashay qaranka.